Mapisarema 74 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Munyengetero wekuti Mwari ayeuke vanhu vake
Mabasa aMwari ekuponesa anoyeukwa (12-17)
“Yeukai kunyomba kwemuvengi” (18)
Maskiri.* Rwiyo rwaAsafi.+ 74 Haiwa Mwari, makatirasirei nekusingaperi?+ Nei hasha dzenyu dzichipfungaidza makwai emafuro enyu?+ 2 Yeukai vanhu vamakawana* kare kare,+Dzinza ramakadzikinura kuti rive nhaka yenyu.+ Yeukai Gomo reZiyoni, nzvimbo yamanga muchigara.+ 3 Itai nhanho dzenyu makananga kumatongo asingaperi.+ Muvengi aparadza zvese zviri munzvimbo tsvene.+ 4 Vanokuvengai vakadzvova vari munzvimbo yenyu yekuungana.+ Vakasimudza mireza yavo kuti ive zviratidzo imomo. 5 Vaiita sevarume vari kusimudza matemo avo kuti vateme sango remiti. 6 Vakakwachura zvese zvakanga zvakatemerwa pairi,+ vachishandisa matemo nemigwara. 7 Vakapisa nzvimbo yenyu tsvene nemoto.+ Vakasvibisa tebhenekeri yaiva nezita renyu, vachiiwisira pasi. 8 Ivo nevana vavo vakati mumwoyo mavo: “Nzvimbo dzese dzekuunganira dzaMwari* dziri munyika dzinofanira kupiswa.” 9 Hapana zviratidzo zvekuti tione;Hakusisina kana muprofita,Uye hapana kana mumwe wedu anoziva kuti izvi zvicharamba zvakadaro kusvikira riini. 10 Haiwa Mwari, mhandu icharamba ichinyomba kusvikira riini?+ Muvengi achashora zita renyu nekusingaperi here?+ 11 Munoregererei kutambanudza ruoko rwenyu, ruoko rwenyu rwerudyi?+ Rubvisei pachipfuva penyu* muvaparadze. 12 Asi Mwari ndiye Mambo wangu kubvira kare kare,Ari kuita mabasa ekuponesa panyika.+ 13 Makabvongodza gungwa nesimba renyu;+Makapwanya misoro yemazimhuka emugungwa ari mumvura. 14 Makapwanya misoro yeRevhiatani;*Makaipa vanhu kuti vadye, vaya vaigara mumagwenga. 15 Makatsemura zvitubu uye hova dzemvura;+Makaomesa nzizi dzaigara dzichiyerera.+ 16 Masikati ndeenyu, uyewo usiku ndehwenyu. Makagadzira chiedza uye zuva.+ 17 Makaisa miganhu yese yenyika;+Makaita kuti kuve nezhizha nechando.+ 18 Yeukai kunyomba kwemuvengi, haiwa Jehovha,Kushorwa kunoitwa zita renyu nerudzi rusina musoro.+ 19 Musapa mhuka dzesango njiva* yenyu. Musakanganwa nekusingaperi upenyu hwevanhu venyu vari kutambura. 20 Yeukai sungano yamakaita nesu,Nekuti nzvimbo dzine rima dzenyika dzazara nevanhu vemhirizhonga. 21 Itai kuti akadzvinyirirwa asadzoka aora mwoyo;+Vakaderera uye varombo ngavarumbidze zita renyu.+ 22 Simukai, haiwa Mwari, mumiririre nyaya yenyu mudare. Yeukai kunyombwa kwamunoitwa nemapenzi zuva rese.+ 23 Musakanganwa zviri kutaurwa nevavengi venyu. Ruzha rwevaya vari kukupandukirai runoramba ruchikwira.
^ ChiHeb., “ungano yenyu yamakawana.”
^ Kana kuti “Nzvimbo dzese dzinonamatirwa Mwari.”
^ Kana kuti “muhomwe yepachipfuva yenguo yenyu.”
^ Kana kuti “mweya wenjiva.”